Dangal, Sultan Iyo Dhoni: Waa Maxay Sababta Ay Aflaanta Xambaarsan Farriinta Isboortiga Ee Bollywood U Guuleystaan? | Filimside.com – Wararkii Ugu Dambeeyay Aflaanta Hindiga	Monday, February 20th, 2017	HOME
Dangal, Sultan Iyo Dhoni: Waa Maxay Sababta Ay Aflaanta Xambaarsan Farriinta Isboortiga Ee Bollywood U Guuleystaan?
Jan 10, 2017 - jawaab	Waxaa Qoray: Super Admin Taariikh: 10, January 2017
Filimka uu hogaamiyaha ka yahay Superstar Aamir Khan ee Dangal waxaa hubanti ah inuu dhaafi doono xujada 350 Crore waana rikoor ay gaari waayeen aflaanta shirkadda Bollywood marka laga hadlayo lacagaha ay kasoo xareeyeen keliya gudaha India.
Dangal wuxuu sidaas ku noqon doonaa The Biggest Bollywood Blockbuster Ever inta laga helaayo filim ka dabataga oo rikoorkaas kala wareega.
Filimkaan waxaa laga sameeyey taariikh nololeedka halyeeyga legdanka ee dalka India Mahavir Singh Phogat kaasoo tababare u noqonaya labadiisa gabdhood kuwaasoo marka dambe India sharaf weyn usoo xareynaya maadaama ay ku guuleysanayaan laba billadood oo Dahab Ah Ciyaaraha Commonwealth Golds iyo billad Qalin ah.
Filimkaan Dangal farriin ahaan wuxuu dhiirrigelin u noqday malaayiin u dhalatay India, gaar ahaan dumarka. Sidoo kale farriintiisa si weyn ayaa loo soo dhoweeyey. Laakiin waxaa la isweydiinayaa sababta ka dambeysa guulaha ay ku tallaabsanayaan aflaanta xambaarsan farriinta isboortiga ah ee ay sameeyaan Bollywood.
Tusaale ahaan Lagaan, Chak de India, Bhaag Milkha Bhaag, Mary Kom iyo aflaan kale oo ay sannadihii ugu dambeeyey sameeyeen Bollywood kuwaasoo iskoorro cusub ka sameeyey Box Office.
DADKA U DHUUNDALOOLA GANACSIGA AFLAANTA BOLLYWOOD AYAA KA JAWAABAY
Sababtoo ah aflaantaani waxay dadka ka caawiyaan inay ku dhiirradaan isboortiga, inay magac weyn iyo maqaam sarre ku dhexyeeshaan bulshada iyo inay sawirtaan guulo waa weyn oo ay ka gaari karaan nolosha dhabta ah.
Sultan waa filimkii uu hogaamiyaha ka ahaa Salman Khan inkastoo uusan sheeko ahaan farriin dhab ah xambaarsaneyn hadana guulo ganacsi ayuu ku tallaabsaday. M.S. Dhoni: The Untold Story waa filim kale oo tusaale wanaagsan loo soo qaadan karo, waxayna ka marqaati kacayaan guulaha aflaanta isboortiga ah.
GUUL RIYO AH
Qiiro ahaan daawadeyaasha iyo taageereyaasha Bollywood aflaanta isboortiga ah waa ay soo dhoweeyaan sababtoo ah waxay ka caawineysaa inay iska indhotiraan guuldarrooyinka isla markaana ay guul qiimo leh u dabaaldegaan.
Sidaas darteed, aflaantaani waxay xambaarsan yihiin guulo soo daahay si qiiro ahaan dareenka shacabka loo kiciyo isla markaana ay isboortiga ugu dhiirradaan. Dr Samir Parikh waa guddoomiyaha Department Of Mental Health And Behavioural Sciences Fortis Group Of Hospitals, wuxuuna daaha ka qaaday in dareenka nuucaan ah uu dadka u wanaagsan yahay iyadoo aan la fiirineyn farriinta uu filimku xambaarsan yahay.
MIDOWGA SHACABKA INDIA
Isboortiga waxaa lagu tilmaamaa inuu sawir ahaan u egyahay diin ay dadka oo dhan isku fahamsan yihiin. Sidaas darteed waxay mideysaa shacabka India oo ka mid ah dalalka laga diiwaan geliyey inay ku dhaqmaan diimaha kala duwan ee ugu badan.
Dr Nimesh Desai waa agaasimaha Institute of Human Behaviour and Allied Sciences wuxuuna aaminsan yahay inay farriinta isboortiga ah ka saameyn badan tahay farriinta siyaasadda ah, balse ma hubo midda diimeed.
Waxaa Aqrisay Warbixintaan (871)